Kubhimbe izinhlelo kwiSundowns kuhlehliswa umdlalo weCAF - Impempe
Kubhimbe izinhlelo kwiSundowns kuhlehliswa umdlalo weCAF
February 22, 2021 Impempe.com
Abaqeqeshi beMamelodi Sundowns, oRulani Mokwena noSteve Komphela
Kumuntu obukela kude, ukuhlehliswa komdlalo weMamelodi Sundowns neCR Bezouidad yase-Algeria kwiCAF Champions League yinto engasho lutho nenike leli qembu laseChloorkop isikhathi sokuphumula.
Kodwa kubaqeqeshi yinto enkulu kwazise kuphazamise izinhlelo zabo eziningi. Omunye wabaqeqeshi, uRulani Mokwena uthi ukumiswa kwalo mdlalo kubhimbise izinto eziningi.
“Njalo uma kuba noguquko ohlelweni kuyasithikameza kakhulu, iqiniso wukuthi wonke umuntu uthanda ukusebenza ngendlela asuke ehlele ngayo…
“Kubalulekile kithi lokhu (ukuhlela) ngoba sithanda ukulandela uhlelo lokuhlukanisa imidlalo ngezigaba. Uma sihlela, sikwenza lokho ngokwezigaba ohlakeni lwesizini yonke.
“Akuwona nje umdlalo owodwa (oshontshile), kodwa sekufanele sizame ukuqinseka ukuthi lesi sigaba singashayisani nesilandelayo,” kuchaza uMokwena.
Uthe ngoba vele akukho abangakwenza uma isinqumo sokuhlehlisa umdlalo sesiphumile, babe sebebheka ukuthi bangasisebenzisa kanjani lesi sikhathi ukuqinisa iqembu.
“Ngebhadi, isimo esinjena asiguquleki. Okungcono esingakwenza wukuthi sikubuke ngelinye iso. Sekusicacele ukuthi sinemidlalo emibili esiyigodlile esizobhekana nayo ngokuhamba kwesikhathi, kumele sikwamukele lokho.
“Kumele sizame ukuthi sisebenzise lesi sikhathi ukhucula iqembu, siyazazi izinto okumele sibe ngcono kuzo. Indlela esidlala ngayo kumele iphucuke.
“Sithole isikhathi sokuba siphumule, sibuyise igazi bese siqinisekisa ukuthi abadlali bakulungele ukungena esigabeni esilandelayo. Indlela esidlala ngayo idinga abadlali abayimiqemane ngaso sonke isikhathi,” kubeka uMokwena.
Lo mdlalo weSundowns owahlehliswa sewuhlelelwe olunye usuku njengoba sewuzoba seTanzania ngoFebhuwari 28. NoweKaizer Chiefs neWydad Athletic uzoba ngosuku olufanayo eBurkina Faso.
Le midlalo yesigaba samaqoqo kwiChampions League yahlehliswa ngoba lamaqembu akuleli engavumelekile ukungena eMorocco nase-Algeria ngoba lamazwe athi asaba ukuthi azofika neCoronavirus.
Previous Previous post: Uselolekile uNcikazi, usefuna ukudla ne-Q3
Next Next post: URama necebo iChiefs engadida ngalo iHoroya koweChampions League